Global Voices teny Malagasy » Teknolojia ho an’ny Mangarahara: Andraikitry ny Governemanta any India · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Novambra 2010 6:44 GMT 1	 · Mpanoratra Renata Avila Nandika Lalatiana Rahariniaina
Sokajy: Azia Atsimo, India, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Teknolojia mampangarahara asa
Aretina mikiky izao tontolo izao ny kolikoly  ary mahakasika na ny firenena mandroso na firenena andalam-pandrosoana, ny sehatra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana, ary ny fikambanana tsy mitady tombony ara-bola sy mpanome fanampiana. Navoitran'ny  tatitra isan-taona an'ny Transparency International tamin'ny 2010 vao tsy ela izay fa mila mampiditra fepetra iadiana amin'ny kolikoly amin'ny sehatra rehetra ny governemanta tsirairay avy. Mazava ho azy fa mila fomba fiasa amin'ny ankapobeny mihoatra noho ny efa natao hatramin'izay izao tontolo izao mba iadiana amin'ny kolikoly, isan'izany ny fiadiana amin'ny antony miteraka izany, toy ny fahantrana sy fitantanana mavozo.
Koa satria ny Technology for Transparency Network (tambazotran'ny teknolojia ho an'ny mangarahara) dia namolavola tetikasa samihafa ho an'ny mangarahara manerana izao tontolo izao , dia nampientanetana anay ny hahita ny firoboroboan'ny fiarahamonina anjakan'ny fangaraharana sy ny etika na aiza na aiza, amin'ny alalan'ny fampiasana teknolojia vaovao sy ny fanentanana ny olom-pirenea tsy hahazaka kolikoly.
Mandray anjara amin'izany fanovana izany i India, firenena lehibe indrindra, manana karazana demokrasia mivalampatra be eto amin'izao tontolo izao. Mpitari-dalana amin'ny governemanta misokatra sy tetipanorona misokatra amin'ny fivoarana misavoanan'ny teknolojia i India. Tsy kisendrasendra raha toa ka izy no firenena mamokatra solosaina afaka entina mandehandeha mora vidy indrindra manerana izao tontolo izao  no miara miasa ihany koa amin'ny firenena hafa toa an'i Etazonia mba hanome tosika ny finiavan'ny governemanta misokatra:
Ny tsara ho marihina dia i India dia fanjakana federaly izay manana teny sy zavamisy isan-karazany. Izay no mahatonga ny fahamaroan'ny finiavana izay mifantoka amin'ny fangaraharana eny an-toerana sy amin'ny fomba ihazonana ny andraikitry ny manam-pahefana eny an-toerana, toy ny Accountability Initiative , io no tranga voalohany nataonay tamin'ny fiodinana faharoa  izay nandinihana ny momba izao tontolo izao. Ny lehiben'ny tetikasa, Yamini Aiyar dia mitsinjara ny andraikitra ao anatin'ny tetikasa mba ampivoatra ny famoahana ny asa ataon'ny fanjakana:
Ny tanjonay goavana dia ny ampiroborobo fomba fanolorana arapanjakana izay mahazo fahalalana sy mandray andraikitra. Fomba roa no anatontonsanay an'izany. Mba hampisy ny fomba fiasa toy izao, dia tsy maintsy misy ny fomba fiasa ara-panjakana mangarahara sy afaka mamaly ny zavatra ilain'ny olom-pirenena, ary ny olom-pirenena dia tsy maintsy amafisina amin'ny fampahalalana mba ahafahany mametraka ny hetahetany ary manosika ho amin'ny fandraisana andraikitra tsara kokoa. Ny asanay manontolo dia miditra amin'ireo sehatra roa ireo miaraka. PAISA  sy Expenditure Track  dia ohatra amin'izany. Ny endriky ny asanay faharoa dia ny ampisy fampiandian-kevitra mikasika ny olana ara-andraikitra.
Tsidio ny tranokalan'ny Technology for Transparency mba ahitana tetikasa momba ny teknolojia ho an'ny mangarahara hafa any India .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/11/20/10755/
 ny kolikoly: http://www.transparency.org/news_room/faq/corruption_faq#faqcorr1
 namolavola tetikasa : https://transparency.globalvoicesonline.org/projects/all
 solosaina afaka entina mandehandeha mora vidy indrindra manerana izao tontolo izao: http://www.reuters.com/article/idUSTRE66M0R720100723
 Bilaogin'ny Governemanta misokatr'i Etazonia: http://www.whitehouse.gov/blog/2010/11/07/a-us-india-partnership-open-government
 fiodinana faharoa: https://globalvoicesonline.org/2010/07/07/announcing-round-two-of-the-technology-for-transparency-network/
 tetikasa momba ny teknolojia ho an'ny mangarahara hafa any India: https://transparency.globalvoicesonline.org/projects/india